Cabdi Qeybdiid oo ka degay Cadaado kadib markii laga xayiray garoonka Galmudug (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 26 September 2014 27 September 2014
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid ayaa ka degay garoonka diyaaradaha degmada Cdaado, kadib markii maamulka Puntland uu xayiraad saaray garoon maamulkiisu ka dhisay Koonfurta Gaalkacyo.
Wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado ku soo dhaweeyay madaxwaynaha maamulka Ximan iyo Xeeb, xubno ka tirsan maamulka, iyo ururada bulshada, iyadoo munaasabad soo dhawayn ah loogu sameeyay xarunta maamulka Ximan iyo Xeeb.
Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid) oo ka mid ah saxiixayaasha shirka Mudug iyo Galgaduud ayaa ka mahadceliyay sida loo soo dhaweeyay, waxaana uu sheegay inuu Cadaado uu u yimid arrimaha shirkaas, islamarkaana Ximan iyo Xeeb uu kala hadlayo sidii loo fududayn lahaa bilaabashada shirka.
Madaxwaynaha Ximan iyo Xeeb C/llahi Cali Maxamed (Baarleex) ayaa soo dhawayn ka dib ayaa ergada beelaha gobolada dhexe si rasmi ah ugu casuumay magaalada Cadaado, isagoo sheegay in maalmaha soo socda ay ergo kala duwan imaan doonaan.
Cabdi Qeybdiid ayaa la filayaa inuu socdaal dhulka ku tago Koonfruta Gaalkacyo, isagoo ka baaqsaday inuu ka dego garoonka Woqooyiga Gaalkacyo ee ay maamusho Puntland.
Xiisad ayaa maalmahaan ka dhextaagneyd maamulada Puntland iyo galmudug, kadib markii Puntland xayiraad saartay garoonka Galmudug dhisatay, iyadoo dooneysa in garoonka Gaalkacyo ahaado kan Woqooyiga oo kaliya, taasoo ka careysiisay Galmudug.